Times24 Nepal » विदेशी मुद्राको ह्वात्तै भाउ बढ्यो, कुन देशको कति ? हेर्नुहोस् …
विदेशी मुद्राको ह्वात्तै भाउ बढ्यो, कुन देशको कति ? हेर्नुहोस् …
काठमाडौँ । आज सोमबार कुवेती दिनारसहित केही देशको मूल्य बढेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ११ रुपैयाँ ५६ पेसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय १२ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४४ रुपैयाँ ५८ पैसा, बिक्रिदर १ सय ४५ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ६४ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ।
युएई दिराम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ भने मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ८३ पैसा छ भने बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ। दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ९ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ६७ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ३ सय ६९ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर २ सय ९५ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर २ सय ९७ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ।
अन्य देशको तालिका हेर्न यो लिंकमा जानुहोस्